Momba anay - Baron (China) Co., Ltd.
Baron (China) Co. , Ltd. dia niorina tamin'ny fampiasam-bolan'ny Baron Group International Holding Co., Ltd.Izy io dia tohanan'ny marika iraisam-pirenena roa lehibe, Besuper sy Baron, dia fikarohana sy fampandrosoana, famolavolana, famokarana, varotra, serivisy ho iray amin'ireo orinasa lehibe famatsiana zazakely.
Ankoatra ny orinasa OEM, tamin'ity taona ity ny orinasanay, mifototra amin'ny traikefan'ny Vondrona sy ny fahatsiarovan-tena momba ny tsena, dia namoaka marika tsy miankina maromaro mba hanomezana vokatra avo lenta sy tsy lafo ho an'ny mpanjifa, anisan'izany ny Besuper Fantastic T Diapers, Pandas Eco Disposable Diapers, Diapers vao teraka, sns, izay tena tian'ny mpanjifa.
Mamolavola sy mamatsy vokatra ODM
Mamolavola vokatra ODM ho an'ny toeram-pivarotana lehibe, fivarotana rojo fikarakarana manokana ary orinasa hafa izahay amin'ny fihainoana, fandinihana ary fisainana momba ny filan'ny mpanjifa.Ny vokatra isan-karazany, toy ny lamban-jaza, famafazana mando, diaper ho an'ny olon-dehibe, kitapo fako manara-maso ny tontolo iainana, lamba fanasan-damba ho an'ny vehivavy ary vokatra fikarakarana manokana hafa ho an'ny mpanjifa.
Agent vokatra marika Premium
Nandritra ny taona maro, ny orinasanay dia niasa mafy mba hananganana fifandraisana maharitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa vokatra ara-pahasalamana manerana izao tontolo izao.Ny orinasanay dia maneho marika avo lenta maromaro, anisan'izany ny Cuddles, Morgan House, ny safidin'ny reny, ny Pure Power, sns. Izahay dia mamatsy vokatra fikarakarana zaza, vokatra fikarakarana olon-dehibe, vokatra fikarakarana vehivavy, sns., ary mahafeno ny filan'ny mpanjifa isan-karazany.
Nahoana isika no mifidy anay?
Ekipa Mpitarika mahomby
Ny ekipa mpitarika matihanina dia mitarika ny orinasa ho amin'ny maodely fandraharahana maoderina.Ny fisainana vaovao dia nitarika anay hanosika ny vokatray any Azia Atsimo Atsinanana, Afrika, Aostralia, Etazonia ary manerana izao tontolo izao.
Ekipa mpivarotra matihanina
Miaraka amin'ny traikefa ara-barotra an-taonany maro, fahalalana vokatra manankarena, fisainana feno fahasahiana sy zava-baovao, ny ekipan'ny varotra miaraka amin'ny mpanjifa samihafa mba hanome ny vokatra tsara indrindra sy ny serivisy akaiky indrindra.
Noho ny manara-penitra ny rojo famatsiana, ny fividianana foibe dia nitondra antsika tombony amin'ny vidin'ny akora;Ny fanaraha-maso hentitra ny rafitra famokarana dia nampitombo ny tahan'ny vokatra vita ary nampihena ny vidiny, mba hahafahantsika manome mpanjifa vokatra avo lenta sy azo antoka.
Mpamatsy tari-dalana manam-pahefana nifanarahana ho an'ny orinasa diaper izahay, fifanakalozana ara-potoana isam-bolana amin'ny fitaovana sy teknolojia vaovao, miantoka ny fanavaozana ny vokatra amin'ny fomba ara-potoana sy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra.
Diaper Baby, Famafana zazakely biodegradable organika, Mpanamboatra Diaper, Diaper vao teraka, Diaper Eco kalitao avo lenta, Bamboo Liner,
Diaper vao teraka, Diaper Eco kalitao avo lenta, Diaper Baby, Bamboo Liner, Famafana zazakely biodegradable organika, Mpanamboatra Diaper,